Thenga iCroda ngendima yayo ephambili kwizitofu zeCovid mRNA
Ukuhlaziywa: 14 April 2021
I-Croda International (i-CRDA), inkampani yeekhemikhali yase-UK, ivakala ngathi iyisitokhwe semizi-mveliso esinothuli-ayisiyonto imnandi kakhulu kodwa izuza ngokuthe ngcembe kwaye ihlawule izabelo. I-Croda ngokuqinisekileyo ihlawula isahlulo, nangona isivuno esisezantsi se-1.7% kwaye umvuzo wayo uhambelana kwaye unokuqikelelwa, kwaye ubukwinqanaba lokukhula eliphezulu kule minyaka imbalwa idlulileyo.
Kodwa into etsala iliso malunga neCroda sisiseko sayo senzululwazi yobomi, ngeli candelo lemisebenzi yenkampani ithatha ukubaluleka kokufika kade, apho inkampani iye yavela njengemishini ebaluleke kakhulu kwizongezelelo zezitofu zokugonya, ngakumbi i-mRNA (messenger RNA Ezisekwe-zenzelwe ukulwa ne-Covid-19.
Ukulandela isivumelwano seminyaka emihlanu esabethwa nePfizer emva kweyeNkanga kunyaka ophelileyo ukubonelela ngezongezo ezine zamachiza, ezaziwa ngokudibeneyo njengezixhamli, ixabiso lesabelo lithathe indawo entsha yobomi.
Abaxhamliyo sisithako esingasebenziyo kwiziyobisi kwaye benza isixhobo esiphakathi okanye isithuthi sokufumana isithako esisebenzayo kumalungu omzimba apho kufuneka khona.
I-Croda ibala ikhontrakthi ne-Pfizer ixabisa malunga ne-100 yezigidi kulo nyaka kuphela ngesiseko se-Pfizer ehambisa i-1.3 yezigidigidi zeedosi zokugonya ze-Covid ngo-2021.
Ngokukodwa, izinto ezenziwa yiCroda zibandakanya indawo entsha yeyeza ebizwa ngokuba yi-lipid nanoparticles (i-SLNs) okanye i-lipid nanoparticles (LNPs), kwaye ziyilelwe ukwenza ukuba izitofu zingene kwiiseli. Le ndlela yenoveli yokuqulunqwa yamkelwe ukuze isetyenziswe ngo-2018.
I-lipid nanoparticles zihlala zikwimeko eqinileyo kwigumbi nakubushushu bomzimba- zizinto zokwakha zeseli kwaye zibandakanya izinto ezinje ngamafutha neoyile. Amasuntswana aqala ngobukhulu ukusuka kwi-50 ukuya kwi-1000 nm. Ukufumana umbono wokuba zincinci kangakanani ii-nanoparticles, inanometer enye ilingana ne-0.0000001 millimeter.
Izabelo zeCroda kuluhlu
Izabelo zenkampani ekhethekileyo yeekhemikhali zatsiba i-10% ngo-Novemba kwiindaba zokuphumelela kwesivumelwano sePfizer.
IiNanoparticles zithintela ukungena ngaphakathi, kwelinye icala, ukutshatyalaliswa ngumzimba ekungeneni nakwelinye icala elenza ukuba iyeza lingene kwiiseli eziphilayo, ke zizinto eziyimfuneko ekwakhiweni kwesiyobisi esitsha.
Unyango olusekwe kwi-RNA (kunye ne-DNA) lubaluleke kakhulu kushishino lweziyobisi, ngokusebenza ngempumelelo kwezitofu ze-mRNA zeCovid ingowona mzekelo mhle ukuza kuthi ga ngoku. Abekho abadlali abaninzi kwicandelo le-SLN / LNP kwaye iCroda iphakathi kwabavelisi abakhulu.
Ngokungafaniyo nezinto zokuthambisa zemveli, kukho ubunzima obukhulu ngakumbi obuchaphazelekayo kwinkqubo yokuxuba kunye neendawo ezinje ngokuhluza kunye nozinzo. Ezi zezinye zezizathu zokuba abavelisi beziyobisi bengakhawulezisanga ukusebenzisa ii-LNPs, kodwa ngamayeza asekwe kwi-mRNA, i-RNA kunye ne-siRNA anzima kakhulu, alukho olunye ukhetho. Impumelelo yePfizer-Biontech kunye neModerna's Covid iye yavula intsimi ngokumangalisayo.
Okwangoku kukho abagqatswa be-mRNA abayi-12 abakhulelweyo okanye abakwinqanaba lokuvavanywa kweklinikhi, ngokwe-World Health Organisation.
Ukusuka kumbono womtyali-mali emva koko, iCroda inendlela enkulu yokukhula phambi kwayo, ethi ithethelele uqikelelo lwangoku olulinganisiweyo ngokwexabiso layo ukuya kumvuzo wama-37.5; kwaye emva ko-Novemba u-spur wakhe urhweba nge-1.4% ngaphezulu kwexabiso lokuvumelana kwabahlalutyi be-broker ye-6476p- ngexesha lokubhalwa kwezabelo zeCroda zithengiswa nge-6655p, inyuke nge-1.3% namhlanje.
Ukumba kwiziphumo zokuphela konyaka zenkampani ukuya kwi-31 ngoDisemba 2020, ingeniso inyuse i-1% encinci ukuya kuthi ga kwi-1.39 yezigidigidi, ngelixa ingeniso iyonke yehle nge-10% ukuya kwi-201 yezigidi.
Nangona kunjalo, la manani afihla igalelo elenziwa licandelo lezeNzululwazi ngezoBomi, elonyuse ingeniso nge-15% ukuya kwi- $ 401 yezigidi.
Ingeniso epheleleyo irhuqiwe phantsi licandelo leshishini loKhathalelo lobuqu, elibhalise ukuwa kwe-16% ukuya kwi- £ 136 yezigidi.
Inzuzo yangaphambi kwerhafu iwele kwi- £ 269 yezigidi xa kuthelekiswa ne- £ 302.3 yezigidi kunyaka ophelileyo, ngelixa umvuzo ngesabelo ngasinye wawuyi-171p ngo-2020 kwaye uqikelelwa kwi-200p kulo nyaka nakwi-221p ngo-2022.
I-Croda ye-LNP iphumelele kulandela ukufunyanwa kwayo kwe-Avanti kunye ne-Iberchem kunyaka ophelileyo kwizivumelwano ezibandakanya umxube wamatyala kunye nokubeka ubulungisa. I-frgracences yaseSpain kunye ne-flavour firm Iberchem (ethengwe nge- $ 736 yezigidi) iqinisa amandla e-Croda esele ikho kwaye i-Avanti iyinkokeli kunikezelo lweziyobisi kusetyenziswa ii-nanoparticles.
Ukufunyanwa bekuyinxalenye yesicwangciso esichaziweyo solawulo 'sokusebenzisa isayensi efanelekileyo ukuphucula ubomi' kwaye ibeke inkampani ukuba ibe ngumdlali ophambili kwikamva lokuhanjiswa kweyeza.
ICroda kukuthenga okuqinileyo.
Ungayithenga iCroda nge-0% yekhomishini kwiqonga lotyalo-mali lehlabathi eToro.
tags Covid-19, ICroda yaMazwe ngaMazwe, izabelo zecroda, Amayeza okugonya e-mRNA, zokugonya